Lumbini Online | हरेक बिरामीलाई कोरोनाको आँखाले हेरिनुपर्छ : डा. रबिन्द्र पान्डेय - Lumbini Online हरेक बिरामीलाई कोरोनाको आँखाले हेरिनुपर्छ : डा. रबिन्द्र पान्डेय - Lumbini Online
हरेक बिरामीलाई कोरोनाको आँखाले हेरिनुपर्छ : डा. रबिन्द्र पान्डेय
बुटवल । केहि दिनअघिं उहाँलाई ज्वरो आएकोले स्थानीय औषधि पसलबाट ज्वरोको औषधि खानुभयो । त्यसले निको नभएपछि मदाने पोलोक्लिनिकमा जांच गराएर २ दिन टाइफाइड ज्वरोको औषधि खानुभयो । २ दिनपछि बान्ता भएकोले फलोअपको लागि सोहि पोलोक्लिनिकमा जानुभयो । जन्डिस भएको, किड्नी खराब भएको भनेर उहाँलाई अर्घाखाँची रिफर गरियो । अर्घाखाँचीको छायाँ पोलिक्लिनिकले उहाँलाई टाइफाइड बिग्रेको, किड्नीको समस्या भएको भनेर क्रिम्सन अस्पताल रिफर गर्यो ।.
क्रिमसन अस्पतालले प्रारम्भिक जाँचमा मेनिन्जाइटिस भएको तथा मुटुमा केहि समस्या भएको अनुमान गर्यो । मेनिन्जाइटिसको निदान गर्नको लागि ढाडबाट पानी निकालेपछि उहाँ बेहोस हुनुभयो । उहांको अवस्था गम्भीर भएकोले आइसीयुमा राखियो । त्यसपछि भेन्टिलेटरमा राखियो । अर्को दिन अर्थात् जेठ १ गते बिरामी पक्षको आग्रहमा कोरोना संक्रमणको टेस्ट गरियो । ५ गते रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो , भेन्टिलेटरमै रहेको अवस्थामा उहाँको निधन भयो ।.
पहिलो र दोस्रो मृत्यु टार्न सकिने प्रकृतिका थिए, समयमै परिक्षण गरिएका थिएनन् । तेस्रो केसमा परिवारले सकेसम्म उपाय गरेको हो । परिक्षण पनि भएको हो ,भेन्टिलेटरको सुबिधा पनि प्राप्त भएको हो, सुरुमै काठमान्डौ ल्याएको भए अवस्था फरक हुनपनि सक्थ्यो, नहुन पनि सक्थ्यो । उहाँमा कोरोना संक्रमणको थ्योरोटिकल लक्षण र कम्लिकेसन देखिएका थिए । पटकपटक जन्डिस भएको हुँदा उहाँको कलेजो, पित्तथैली वा पित्तनलीको कुनै दीर्घरोग हुनसक्छ । अस्पतालले सुरुमा शंका गरेको मुटुको रोग पी हुन् सक्छ । निमोनियाको हिस्ट्री पनि देखिन्छ । यसबाट थाहा हुन्छ कि उहाँ जोखिम बर्गमा हुनुहुन्थ्यो ।.
यसबाट हामी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र हाम्रा अस्पताललाई के कुरा सिकाएको छ भने कोरोना संक्रमित व्यक्तिको सिबिसि अर्थात कम्प्लिट ब्लड काउन्ट, कलेजोको फंक्सन, किड्नीको फंक्सन, सम्बन्धित समस्याको निदान हुने गरि सिटिस्क्यान ,मुटुको परिक्षण, मस्तिष्कको परिक्षण लगायतका टेस्ट तुरुन्त अनिबार्य रुपमा गर्नुपर्छ । यो महामारी फैलिएको समयमा हरेक बिरामीलाई कोरोनाको आँखाबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । शंका लागेमा तुरुन्त कोरोना उपचार हुने सुबिधासम्पन्न अस्पतालमा रिफर गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ ।.
उहाँ गाउँमै बसेको, अन्य ट्राभल हिस्ट्री तथा कन्ट्याक हिस्ट्री नभएको तथा आफै सचेत र सजग व्यक्ति भएको कारण कसरी सर्यो भनेर परिवार तथा गाउँ नै स्तब्ध भएको तथ्यले के संकेत गर्छ भने कोरोना संक्रमण गाउँमा पनि हुनसक्छ ।.
अर्को कुरा उहाँलाई सेप्सिस भएको अर्थात रगतमा संक्रमण भएको तथा मल्टिपल अर्गान फेलियर भएको भनेर अस्पतालले जनाएको थियो । अर्को मत के छ भने ‘ उहाँको मृत्युमा माथि उल्लेखित कुनै कारणले हुनसक्छ । कोरोना संक्रमण एम्बुलेन्सबाट सरेको हुनसक्छ । बिरामी अवस्थालाई कोरोना संक्रमणले जोखिममा पारेको हुनसक्छ, मृत्युको कारण कोरोना संक्रमण नहुन पनि सक्छ । ’
कुनैपनि रोग सुरुमा निदान भयो भने तथा तुरुन्तै सहि उपचार भयो सन्चो हुन्छ । जति ढिलो निदान र उपचार भयो, त्यति नै जोखिमयुक्त हुन्छ । उहाँको उमेर ४१ बर्षमात्र थियो । उहाँलाई पहिले फोक्सोको रोग, किड्नीको रोग, मुटुको रोग आदि थियो कि थिएन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हाम्रा एम्बुलेन्सलाई पूर्ण संक्रमणरहित बनाउन हरेक निकाय संबेदनशील हुनुपर्दछ । एम्बुलेन्स र अस्पताल संक्रमित भएमा मृत्युदर धेरै बढ्ने जोखिम हुन्छ । मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली तथा शोकाकुल परिवारमा समबेदना व्यक्त गर्दछु । हाम्रो जिल्लाको पहिलो कोरोना संक्रमितको निधन भएकोमा थप स्तब्ध भएको छु ।